अन्वेषण किन तपाईं यो चाहनुहुन्छ । तपाईं छैन भने, एक विशिष्ट व्यक्ति मन, त्यसपछि तपाईं आकर्षित गर्न एक अवधारणा वा तिर्नुपरेको को एक जापानी केटी छ । थाह छैन जापानी मान्छे अर्थ यो छ कि ज्यादातर आफ्नो टाउको मा.
उनलाई धेरै धेरै फरक हुनेछ देखि यो, र यो तपाईं बनाउन हुनेछ बाझिने भने तपाईं कहिल्यै मिति एक जापानी केटी छ । तपाईं पाउन सक्छ तथ्यलाई मतभेद पैदा तपाईं समस्या पनि भने, तिनीहरूले छैनन् निहित समस्या छ । म सुझाव पुग्न संग रोमान्स खुला मन छ. खुला हुन सिक्ने बारे कसैलाई र आफ्नै अनुपम गुणहरू । के तिनीहरूलाई बनाउँछ हाँस्नुहुन्थ्यो । के कुराहरू छन्, तिनीहरूले राम्रो? के तिनीहरूले साँच्चै भावुक बारेमा? तिनीहरूले के के भनेर तपाईं (र कति)? बरु पाउन प्रयास गर्न कसैलाई भेट्न आफ्नो चित्र, प्रयास र कसरी बाहिर आंकडा आफ्नो जीवन गर्न सक्छन् जाल संग बाटो वास्तविक व्यक्ति छ । मेरो साथी को एक विवाहित एक जापानी केटी छ । म तिमीहरूलाई भन्छु पर्छ यो एक लामो रन । उहाँले गरे कलम मित्र संग जापानी गर्दा उहाँले अझै पनि थियो जूनियर उच्च छ । तिनीहरूले पत्र र हामी साथीहरू अझै.
अन्तमा, आफ्नो, एक्कासि सबै, उहाँले हामीलाई भन्नुभयो उहाँले लगी थियो एक जापानी छ । र तिनीहरूले एक छोरी छन् अब । जापानी बोल्न र आफ्नो जापानी पत्नी चिनियाँ बोल्न, तिनीहरूले, प्रत्येक अन्य कुरा, अंग्रेजी मा
र आफ्नो परिवार धनी छ, तर एक विशिष्ट मध्यम वर्ग एक । तर, एउटा कुरा याद गर्न छ कि उहाँले एक खेलाडी, अग्लो र सुन्दर जस्तै घाम । भाषा सिक्न पहिलो छ । एक पटक तपाईं बुनियादी तल जानुहोस्, पाउन एक जापानी फोरम (निश्चित यो गरेको छ एक । माथि डोमेन) र पोस्ट सम्म मान्छे रोक्न कल तपाईं अशिक्षित छ । (बताएर तपाईं तिनीहरूलाई हुनुहुन्न एक देशी वक्ताले)
← साइटहरु - फ्री च्याट भावनाहरु
चिनियाँ डेटिङ साइट - मुक्त अनलाइन डेटिङ मा चीन →